Ahoana ny fomba hanatanterahana tsara ny drafitra fandraharahana - Victor Mochere
Ny tontolon'ny fandraharahana dia miha-mitombo ny fifaninanana. Raha izany no izy, dia ilaina ny mivoatra amin'ny fomba tsy tapaka mba hamelomana ny tenany ny orinasa. Raha tsorina dia mila manova ny fomba fiasany sy ny fomba fiasany ny orinasa mba hiarovana ny hoaviny. Na izany aza, ny fanovana rehetra dia tokony hifanaraka amin'ny drafitra stratejika mahomby. Hotohizana, ny famolavolana drafitra stratejika ho an'ny fahavelomana maharitra dia zavatra iray ary hafa ny fanatanterahana azy ireo amin'ny fahatanterahana.
Amin'ny maha-mpitarika orinasa anao dia mila miasa amin'ny fampiharana mahomby amin'ny drafitra stratejika ianao mba hitondrana ny vokatra tadiavina. Ho an'ny orinasam-pandraharahana mitombo sy mandroso, ny fahombiazan'ny drafitra stratejika dia tena ilaina. Eto ianao dia mila misongadina amin'ny maha-mpitarika anao ary mifantoka amin'ireo fepetra fototra ilaina mba hahombiazan'ny drafitra stratejika. Noho izany, inona avy ireo fepetra fototra amin'ny fahombiazana amin'ny drafitra stratejika mifandray amin'ny fironana ara-barotra lehibe? Inona no mahatonga ny drafitra stratejika mahomby?
Ireto ny refy misongadina amin'ny fanatanterahana mahomby ny drafitra fandraharahana mikendry ny tombontsoa maharitra.
2. Tanjona sy tanjona
3. Tondro fampandehanana fototra
4. Fifandraisana stratejika
5. Teknolojia mety
7. Fepetra fanaraha-maso ho fanatsarana mitohy
Ny voalohany ary raha ny marina, ny refy imperative indrindra amin'ny drafitr'asa stratejika rehetra dia ny fahitana ao ambadik'izany. Rehefa miasa amin'ny drafitr'asa stratejika mikendry ny hitondra fahombiazana maharitra ianao dia mila mamaritra ny vina ao ambadik'izany aloha. Ankoatr'izay, rehefa mamaritra ny vina ianao dia mila mamantatra ny soatoavina fototra mifandray amin'ny drafitra stratejika. Mba hanazavana, ny ankamaroan'ny drafitra stratejika dia manome lalana ho an'ny fiovana tsara ao anatin'ny fikambanana.
Rehefa nilaza izany ianao, amin'ny maha-ampahan'ny fitantanana ny fanovana mahomby, dia mila mamaritra ny vina, ny tanjona ary ny soatoavina ao ambadiky ny fanovana ianao. Raha tsy mamaritra ireo mari-pamantarana ireo ianao dia tsy ho feno ny drafitra stratejika. Ankoatr'izay, lafiny iray hafa manan-danja amin'ny fanatanterahana drafitra stratejika dia ny fananana ny mpandray anjara rehetra ao anaty sambo.
Rehefa tsy maintsy mandresy lahatra ny mpitantana ambony sy ny mpampiasa vola ianao dia mila mahazo ny fahatokisany. Mba hanaovana izany, mila manazava amin'izy ireo ny vinan'ny drafitra stratejika sy ny tanjona tratrarina. Ahoana no andrasanao handresy lahatra azy ireo raha tsy azonao antoka ny vina sy ny soatoavina ao ambadik'izany? Noho izany, ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny famaritana ny hatsaran-toetra sy ny fomba fijerin'ny drafitra.
Raha mandroso ianao dia mila mamantatra ireo tanjona sy tanjona fototra izay tena ilaina amin'ny drafitra stratejikao. Ny tanjona sy ny tanjona dia mety ampifandraisina amin'ny fitantanana ny fampisehoana, ny fametrahana ny teknolojia, na ny fanatsarana ny fahombiazana. Ohatra, andao atao hoe ny drafitra stratejikao dia ny fananganana ny fahefan'ny marika ho an'ny orinasanao ao anatin'ny telo na dimy taona ho avy. Ankehitriny, raha te hahomby amin'ity drafitra stratejika ity ianao dia mila miasa amin'ny tanjona ara-barotra isan-karazany, fifandraisana amin'ny besinimaro ary fitazonana mpanjifa.
Ankoatr'izay, ireo tanjona ireo dia mety ahitana tanjona toy ny fandraisana manampahaizana momba ny varotra nomerika, fikarohana momba ny tsena mahomby, na fanatsarana ny tahan'ny CTR. Miaraka amin'ny andalana mitovy, ny drafitra stratejika tsirairay dia hanana ny anjarany manokana amin'ny tanjona sy tanjona mifandraika amin'izany. Mba hahatanteraka tsara ny drafitra stratejika dia mila mahafantatra ny tanjona SMART mifandraika amin'izany ianao.
Rehefa mamaritra ny tanjona sy tanjona amin'ny fomba mahomby ianao, dia manome mazava tsara. Ho fantatrao tsara izay tokony hataonao sy azonao atao mba hahombiazan'ny drafitra stratejika manokana. Raha ny marina dia zavatra tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny drafitra stratejika. Raha tsy misy fahatakarana mazava ny tanjona sy tanjona, dia tsy hisy vokany ny fanatanterahana azy. Misy dikany tanteraka, sa tsy izany?
Inona no manaraka rehefa avy namaritra ireo tanjona sy tanjona ianao? Azo antoka fa mila izany ianao araho ny fahombiazan'ny paikadinao mampiasa metrika mifandraika. Raha tsy misy metrika, ahoana no hamaritana raha hahavita ny zava-bitanao amin'ny fe-potoana voatondro ianao? Eo no ahitana ny tondro fampandehanana fototra. Ny mari-pamantarana manan-danja dia fepetra azo tsapain-tanana izay manara-maso ny fandrosoan'ny paikady fandraharahana.
Ohatra, raha ny momba ny paikady ara-barotra nomerika, ny KPI dia misy ny tahan'ny bounce, ny fiovam-po, ny CTR, ny fotoana hipetrahana, sns. Toy izany koa, ho an'ny paikady ara-bola, ny metrika fototra dia ahitana ny tombom-barotra, ny COGS, ny fikorianan'ny vola, sns. Ny fanaraha-maso miaraka amin'ny KPI dia manome fandrefesana fandrosoana sy fahombiazana amin'ny fotoana tena izy. Ankoatr'izay, ny KPI dia manolotra sehatra lehibe ho an'ny famakafakana ny elanelana mba hahafahanao manatsara ny paikady hahazoana fahombiazana tsara kokoa.
Ny tena ilaina dia ny mamantatra ireo KPI mifandraika amin'ny drafitra stratejikao sy ny tanjona mifanaraka amin'izany. Raha ny marina, tsara kokoa hatrany ny tanjona rehefa azo refesina, sa tsy izany? Izany dia manazava ny maha-zava-dehibe ny tanjona sy tanjona SMART amin'ny tontolon'ny orinasa. Rehefa SMART ny tanjonao dia azonao atao ny manara-maso azy ireo amin'ny fomba mahomby kokoa. Na izany aza, miankina amin'ny fahombiazanao izany amin'ny farany amin'ny fanekena ny KPI mety.
Ny lafiny manan-danja manaraka amin'ny fanatanterahana drafi-pandraharahana stratejika dia ny famolavolana paikady momba ny fifandraisana. Ny famonoana dia tsy voafetra amin'ny famaritana ny vina, tanjona, tanjona ary KPI. Mba hanatanterahana mahomby dia ilaina ny mampita izany amin'ny ekipanao amin'ny fomba mahomby. Miasa tsara kokoa ny drafitra rehefa manana fahatakarana mazava momba izay iasany ny ekipanao. Ankoatr'izay, tokony holazainao amin'izy ireo ny KPI izay hampiharinao handrefesana ny zava-bitany.
Raha ny marina, amin'ny fanatanterahana drafitra stratejika dia betsaka ny zavatra ilainao hampitaina amin'ny ekipanao. Arakaraka ny azon'izy ireo tsara kokoa ny antsipirihan'izy ireo no hifanaraka tsara kokoa amin'ny drafitra stratejika. Raha tsy izany, raha tsy misy ny fifandraisana mazava dia mety hisy ny fisafotofotoana sy ny tsy fahatokisana. Ireo fitaoman-dratsy ireo dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ny paikady takiana. Azo antoka fa tsy tianao hitranga izany, sa tsy izany?
Rehefa nilaza izany ianao, dia ilaina ny mamolavola paikady fifandraisana mahomby sy stratejika. Raha toa ka miasa lavitra ny fikambananao, dia azonao atao ny miantehitra amin'ny fitaovam-pifandraisana anatiny mahomby mba hitazonana ny fikorianan'ny vaovao tsy tapaka. Araka ny henontsika matetika dia ny fifandraisana no zava-dehibe ary mila manaiky ny zava-misy fa tsy maintsy hisy foana izany. Miankina be dia be amin'ny fifandraisana mahomby raha ny fahombiazan'ny orinasa no resahina.
Miaina ao anatin'ny vanim-potoanan'ny revolisiona nomerika isika ary ny teknolojia kintana no mitarika izany. Amin'izao tontolo izao, toa tsy azo eritreretina ny mieritreritra ny asa fandraharahana tsy misy teknolojia. Ny fandrosoana ara-teknolojia dia mitondra fahombiazana tsy azo eritreretina amin'ny sehatra rehetra amin'ny asa fandraharahana. Mba hanamarinana, ny teknolojia toa ny AI, IoT, fitaovana fiaraha-miasa ara-tsosialy, sy ny sisa dia manova ny endriky ny tontolon'ny orinasa ho tsara kokoa.
Mazava ho azy fa mampitombo ny fampiasam-bolany amin'ny teknolojia manakorontana ny orinasa mba hanamafisana ny fahombiazany. Rehefa nilaza izany, ny orinasa dia mahita sehatra lehibe amin'ny fanatanterahana ny tanjona stratejika miaraka amin'ny fampiasam-bola ara-teknolojia mety. Mila mampiditra ara-potoana ireo fitaovana sy lozisialy mety ianao izay afaka mampitombo ny fahombiazan'ny paikady sy tanjonao.
Mila mandinika hoe iza amin'ireo teknolojia no manan-danja indrindra amin'ny tanjonao stratejika ary manolotra ROI ambony. Tsy te hanohy hampiasa vola amin'ny teknolojia tsy tapaka ianao. Azo antoka fa hampitombo ny fandaniana amin'ny fampandehanana ny orinasanao izany. Noho izany, mila mijery ireo teknolojia izay manome hery lehibe amin'izao fotoana izao sy ny ho avy ianao. Ny fampiasam-bolanao amin'ny teknolojia dia tsy maintsy mifototra amin'ny drafitra sy vina maharitra.
Ankoatra izany, ho an'ny fahombiazan'ny drafitra stratejika rehetra, ny fandraisana andraikitra dia manana lanjany lehibe. Amin'ny maha-mpitarika orinasa anao dia mila manamboatra ny tamberin'andraikitra amin'ny ambaratonga rehetra ianao mba hahazoana antoka fa milamina ny zava-drehetra. Manomboka amin'ny ambaratonga mpanatanteraka ka hatramin'ny ambaratonga mpitantana dia mila tompon'andraikitra amin'ny andraikiny sy ny asany ny tsirairay. Rehefa manao rariny lehibe ny tsirairay amin'ny anjara andraikiny, dia mikoriana amin'ny fomba tsara ny zava-drehetra.
Raha ny tanjona stratejika no resahina dia tsy afaka mamela zavatra ho kisendrasendra ianao. Amin'ny maha-mpitarika anao dia mila mitondra amin'ny alalan'ny ohatra ianao amin'ny resaka fandraisana andraikitra. Araka ny voalazan'ny HBR, mihoatra ny 80 isan-jaton'ny mpitantana no milaza fa manana tsy fahaiza-mitantana ny mpiasa izy ireo. Azo antoka fa tianao ny hanova ity toe-javatra ity amin'ny tontolon'ny fikambananao. Ny fahombiazanao amin'ny fampiroboroboana ny fahatsapana ho tompon'andraikitra ao amin'ny ekipanao dia ho zava-dehibe.
Mifameno ny fanatanterahana sy ny fanatsarana mitohy. Rehefa mampihatra drafitra stratejika ianao dia hisy foana ny fiafarana tsy misy farany. Raha ny marina, dingana iray tokony hataonao izany miaraka amin'ny hevitra hanatsara hatrany. Fa ny fanontaniana dia hoe, inona no ilaina mba hitondra fanatsarana mitohy aorian'ny fampiharana ny paikady? Tsotra ny valiny, mila fepetra fanaraha-maso mahomby ianao amin'ny fanatsarana ny fiantraikan'ny paikady sy drafitra.
Ireo fepetra fanaraha-maso ireo dia mety amin'ny endrika tetika fanampiny, fanofanana mpiasa, na fifampizarana hevitra. Arakaraky ny hahombiazan'ny fepetra fanaraha-maso ataonao, dia ho lehibe kokoa ny sahan'ny fanatsarana tsy tapaka. Miaraka amin'ny fepetra fanaraha-maso mety, azonao atao ny manatsara ny paikadinao mba hahazoana ny vokatra tadiavina. Na izany aza, asa manokana ny fametrahana ny fepetra fanaraha-maso mety. Mila manao izay hahazoanao antoka ianao fa mahay amin'ity fikatsahana ity mba hahazoana vokatra miavaka.
Ho famaranana, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny famolavolana drafitra stratejika sy ny fanatanterahana azy ireo amin'ny fomba mahomby. Ny fahombiazan'ny orinasanao dia miankina amin'ny fahombiazan'ny fanatanterahana. Ho an'ny ampahany amin'ny famonoana, ireo paramètre na refy etsy ambony no zava-dehibe indrindra. Raha mbola azonao tsara ireo refy ireo dia afaka misongadina amin'ny drafitra stratejika rehetra ianao.